Impumelelo kwi-Intanethi iqala nge-CXM | Martech Zone
Impumelelo kwi-Intanethi iqala nge-CXM
NgoMgqibelo, ngoMeyi 4, 2013 NgeCawa, Meyi 5, 2013 UGary Galvin
Ulawulo lwamava abaThengi lusebenzisa itekhnoloji ukubonelela ngamava abo kunye nokuhambelana komsebenzisi ngamnye ukuze kuguqulwe amathemba kubathengi bexesha elide. I-CXM ibandakanya ukuthengisa ngaphakathi, amava ewebhu, kunye nolawulo lobudlelwane babathengi (CRM) inkqubo yokulinganisa, ukulinganisa kunye nokuvavanya unxibelelwano lwabathengi.
Uza kwenza ntoni?
I-16% yeenkampani bonyusa uhlahlo-lwabiwo mali lwabo lwentengiso yedijithali kunye nokwandisa inkcitho iyonke. I-39% yeenkampani zonyusa uhlahlo-lwabiwo mali lwazo lwentengiso ngokwabelana ngolwabiwo mali esele likhona kwintengiso yedijithali. Ngokwala kunye namanye amanani avela ku Ingxelo ka-2013 evela kuMbutho wee-Arhente zeDijithali, Amandla okuzibandakanya kunye nembuyekezo kutyalo-mali kwintengiso kwi-Intanethi zigqithile kwizibonelelo zangaphambili zentengiso yesiko ezinje ngeTV, iphephandaba, iibhodi zezaziso okanye unomathotholo. Ukwazi ukwenza i-1-on-1 yokuzibandakanya kunye nabaxumi, abanokubakho kunye nabangoku, baguqule ukuthengisa kunye nehlabathi lokuthengisa. Konke oko kunokwenzeka nge-CXM.
Izitshixo zeCXM Impumelelo
Ukutsala abaThengi abatsha kwindawo yakho Sebenzisa iindlela zokuthengisa ezingenisiweyo, abathengi abatsha baya kuziswa kwindawo yakho ngamajelo eendaba ezentlalo, i-SEO, iibhlog, ividiyo, amaphepha emhlophe, kunye nezinye iindlela zokuthengisa umxholo.
Ukubandakanya abatyeleli beWebhusayithi yakho -Zisa umyalezo wakho ebomini kumsebenzisi ngamnye ngesiqulatho esenzelwe wena undwendwe ngalunye olusekwe kwindlela abaziphethe ngayo. Oku akuzukubenza babone umyalezo abawufunayo kuphela, kodwa iinkampani eziye zazalisekisa ezi ndlela zibone ukukhula kwengeniso kunye ne-148% yokubuya kutyalo-mali lwabo. Isibini esi siyasebenziseka, uyilo olunxibelelanayo kunye nesicwangciso esomeleleyo somxholo kwaye unesiseko esomeleleyo sokubeka ukuthengisa kunye neenzame zakho zokuthengisa ukusuka.
Ukuphunyezwa kweCRM yeNtengiso -Izicelo zeCRM zisebenza njengehabhu kubo bonke ubukrelekrele babathengi, ezenza ukuba iinkampani zibambe idatha ebalulekileyo kuyo yonke imizamo yentengiso kunye nokwandisa ukusebenza kweenzame zabo zentengiso.
Ukugcina abaThengi kunye neThemba -Ngokuzibandakanya okusebenzayo okanye iphulo "lokuchukumisa", ukugcinwa kwabathengi okwangoku kuya kulungiswa. Ukusetyenziswa kwemishini yokuthengisa kunye nokubandakanya abathengi bangoku kwimizamo yakho yokuthengisa engenayo yindlela yokuphumelela ekugcineni ukugcinwa kwabathengi.
tags: Ngo-2013 uluntu lwee-arhente zedijithaliIngxelo yesoda ka-2013CRMUlawulo lwamava abathengiulawulo oludibene nabathengicxmItekhnoloji yegalvinmzantsiuluntu lweearhente zedijithaliI-SoDa
UGary Galvin ngumongameli kunye nomseki we IGalvin Technologies -Iwebhu kunye nenkampani yesoftware eIndianapolis, IN. Uyiqale le nkampani ngombono wokuba nenkampani ebeka umgangatho wokuba ziqhutywa njani na iiprojekthi. Ngokugxila kakhulu ekwakheni iinkqubo zeprojekhthi zesoftware kunye nokuqinisekisa ngexesha kunye nohlahlo-lwabiwo mali, iGalvin Technologies ikwazile ukuba yinkokeli kolu shishino. UGary uvela eDetroit, MI kodwa unebhongo ngokubiza ikhaya laseIndiana nenkosikazi yakhe nabantwana babo abane.
Ingxelo ye-SoDA ka-2013: I-Outlook yeNtengiso yeDijithali